एकाबिहानै विद्यादेवीको साक्षात् - व्यंग्य - प्रकाशितः माघ २४, २०७३ - नेपाल
एकाबिहानै विद्यादेवीको साक्षात्
वसन्त पञ्चमीमा राजधानीवासी बिहानै उठे । नुहाईधुवाई गरेर खाली पेटमै सरस्वती मन्दिर जान बाटोमा निस्किए । तर, बाटो त पूरै बन्द रहेछ । अघोषित बन्द हो कि भनेको त महामहिम राष्ट्रपतिको सवारी । राष्ट्रपति वसन्त श्रवणका लागि हनुमान ढोका जाँदै रहिछन् । बाटो पूरै खाली, चरा–मुसा हिँड्न दिइएको थिएन । बाटो काट्न त कसको हिम्मत होस् ?
झन्डै दुई घन्टापछि सुनसान चिर्दै मन्द मुस्कानका साथ बाटोको दायाँबायाँ उभिएका जनतालाई नमस्कार गर्दै राष्ट्रपतिको ‘सवारी’ भो । भोको पेटमा उभिएका जनताले कसैले नमस्कार गरे त कोहीले ताली पड्काए । बाटो खुल्ला भो जनता मन्दिरतिर हान्निए र विद्याकी देवी मानिने सरस्वतीको ढुङ्गे मूर्तिको दर्शनका लागि लाइन लागे । भोको पेटमा उभिएका केही त लाइन बस्दा बस्दै बेहोस भएर ढले । किन नढलून् त ? सरर गाडीमा हात हल्लाउँदै आएकी साक्षात् विद्यादेवीको दर्शनले नपुगेर ढुङ्गाकी देवी खोज्दै हिँडेपछि !